2022 Subaru BRZ မှာ Turbocharger မလိုအပ်တော့သည့် အကြောင်းအရင်း ! – MyMedia Myanmar
2022 Subaru BRZ မှာ Turbocharger မလိုအပ်တော့သည့် အကြောင်းအရင်း !
Subaru ရဲ့ BRZ ကိုမှ မူလ Version ကို ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီး နောက်မှာ ပရိသတ် အတော်များများ က အကြိုက်တွေ့ကြပြီး ပိုပြီးတော့ စွမ်း ဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ Subaru BRZ အမျိုး အစားကို ထုတ်လုပ် ပေးဖို့ အတွက် မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် WRX မှာလိုမျိုး Turbocharger ပါဝင်တဲ့ ပုံစံကိုတောင့်တကြတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Engineering Explained ရဲ့ တင်ဆက်သူ ဖြစ်တဲ့ Jason Fenske ကတော့ အခု ဒီဇိုင်း ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ 2022 Subaru BRZ မှာ Turbocharger ဘာကြောင့် မလိုအပ်တော့သ လဲ ဆိုတာ အသေအချာ ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အခု ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက် BRZ မှာတော့ ယခင်မျိုးဆက် အဟောင်းရဲ့ 2.0 Liter Unit ကို ဖယ်ထုတ်ကာ 2.4 Liter Flat-Four Engine နဲ့ အစားထိုးထား ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုလိုမျိုး အစားထိုး ပြောင်းလဲ လိုက်တာကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမို တိုးတက်သွား စေတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း 2022 Subaru Model အနေနဲ့ 228 hp နဲ့ 184 lb-ft Torque အထိကို ရှိခဲ့ကာ ယခင် မော်ဒယ် အဟောင်းရဲ့ 205 hp နဲ့ 156 lb-ft Torque နဲ့ ယှဉ်ရင် အတော်လေး တိုးတက်ခဲ့တာပါ။ တစ်ဖက်မှာလည်း Subaru ထံမှာ 260 hp နဲ့ 227 lb-ft Torque အထိ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ Turbocharged 2.4 Liter Engine ကလည်း ရှိနေပြီး လက်ရှိမှာတော့ အခြားသော အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်တဲ့ Ascent ၊ Legacy နဲ့ Outback တို့မှာ ထည့်သွင်း အသုံး ပြု နေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အခု BRZ Engine ကရော ဘာလို့ Turbocharged ဖြစ်စရာ မလိုတော့သလဲ ဆိုတာ အဖြေရှာ ကြည့်ကြရအောင် ပါ။
Fenske ရဲ့ အဆိုအရတော့ BRZ ဟာ Turbocharger မလိုအပ်တော့တဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်ကတော့ ကားမှာပါဝင်တဲ့ ဂီယာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကားရဲ့ အင်ဂျင် ဖြစ်တဲ့ Naturally Aspirated Engine ဟာ ဆိုရင် သာမန် 6,000 rpm ရှိတဲ့ Turbocharged Engine ထက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုနေပြီး Redline အားဖြင့် 7,500 rpm အထိ ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ အင်ဂျင် စနစ် ကြောင့်လည်း ပိုပြီးထူးခြား ကောင်းမွန်ကာ Aggressive ပိုဖြစ်တဲ့ Gearing ပိုင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ အခုလို အချက်အလက် တစ်ချို့ ကြောင့်ပဲ ပိုပြီး မြန်ဆန်တယ် ဆိုတဲ့ အရှိန်နှုန်း ပမာဏကို ပေးစွမ်းထားနိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ Fenske က ဆိုခဲ့ကာ BRZ Engine ရဲ့ အနည်းငယ် လျော့နည်းတဲ့ Output ပိုင်းကိုတော့ ခြွင်းချက်လို့ပဲ ယူဆရမယ့် သဘော ရှိပါတယ်။ BRZ ကားကို Turbocharger ထည့် သွင်းရမှာ တကယ်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ Fenske ရဲ့ အဆိုအရတော့ Ascent အမျိုးအစားမှာ ဆိုရင် အောက်ခြေမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ Turbo ဖြစ်တာကြောင့်နဲ့အခု BRZ ရဲ့ အတော်လေးနိမ့်တဲ့ Chassis အပိုင်းမှာ အင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ Configuration ကြောင့်လည်း Turbo ထပ်တပ်ဖို့ မလွယ်ကူတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အနေအထားကတော့ Center Of Gravity ကို ထိန်းညှိ ပေးထားရုံမကပဲ Handling ကိုလည်း တိုးတက်စေတာ သေချာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Tubro Engine ဆိုတာ ကလည်း လေးလံတဲ့ အရာ ဖြစ်တာကြောင့် Fenske ရဲ့ အဆိုအရ ကားရဲ့ မူလလျှင်မြန်မှုကို ပြန်လည် လျော့ကျသွား စေနိုင်ပြန် ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အချက် အနေနဲ့‌ကတော့ အခု ကားရဲ့ Naturally Aspirated Engine ဟာ ဆိုရင် Throttle Response နဲ့ Throttle Control တို့ကို ပိုပြီး ကောင်းမွန်စေပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ဖက်မှာ ဆိုရင်လည်း ခေတ်ပေါ် Turbo Engine တွေ အနေနဲ့ ယခင် တုန်းက လိုမျိုး Turbo Lag ဖြစ်တာကို မကြုံတွေ့ ရနိုင်တော့ပေမယ့် Naturally Aspirated Engine တွေ လောက်တော့ တုံ့ပြန်မှု အပိုင်းမှာ မကောင်းနိုင်သေးပဲ အားနည်း နေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် Turbocharged ဖြစ်တဲ့ 2022 BRZ ကိုမှ လိုချင်ပါတယ် ဆိုရင်တော့ Aftermarket ဈေးကွက် ထဲက ဖန်တီးမှု တွေကို ဆက်လက် စောင့်ကြည့်လို့ ရသေးတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post 2022 Subaru BRZ မှာ Turbocharger မလိုအပ်တော့သည့် အကြောင်းအရင်း ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-19T13:00:36+06:30January 19th, 2021|MYCARS MYANMAR|